Izinhloso Zokukhangisa nge-Digital B2014B zango-2, Izabelomali, Imisebenzi kanye Nezinselelo | Martech Zone
NgeSonto, Septhemba 14, 2014 NgeSonto, Septhemba 14, 2014 Douglas Karr
Omobono's yakamuva Okusebenzayo Kuphi ucwaningo luhlinzeka ngesifinyezo se- Ukumaketha kwedijithali kwe-B2B ngo-2014. Ngokubambisana ne Inhlangano Yokumaketha futhi Circle Ucwaningo, babuza abamakethi abaphezulu bezebhizinisi abayi-115 ngokumaketha kwabo kwedijithali izinhloso, izabelomali, imisebenzi nezinselelo. Umbiko ogcwele, ohlanganisa imiphumela yocwaningo, ukuhlaziywa kongoti nezincomo, uzoshicilelwa kule nyanga. Ukuthola ikhophi yakho yedijithali ngokushesha lapho isitholakala, sicela bhalisa kusayithi lika-Omobono.
Imiphumela esemqoka evela kulo mbiko imi kanje:
Okubalulekile Kwezentengiso ze-B2B online ubuholi obucatshangwayo, ubudlelwane bamakhasimende kanye nokuqwashiswa komkhiqizo.
Izabelomali Zokumaketha ze-B2B ixhasa kakhulu ukumaketha kwedijithali ngama-39% wesabelo-zimali sokukhangisa jikelele.
Iziteshi Zokukhangisa ze-B2B ezokuxhumana kanye neselula.
Izinselele Zokumaketha ze-B2B kufaka phakathi ukuntuleka kwezinsizakusebenza, ukukala ukusebenza kahle nokuntuleka kobuchwepheshe ngaphakathi endlini.
Izikhala kumakhono wokukhangisa we-B2B kukhona analytics & nokubika, isu nokuhlela, nocwaningo nemininingwane.
Ukulinganisa i-B2B Marketing ROI iyaqhubeka nokuba yinselelo, ngo-16% kuphela wabakhangisi abazizwa belinganisa ngokunembile imbuyiselo yotshalo-mali.
Isifinyezo semiphumela ebalulekile ka-Omobono yile infographic engezansi:
Tags: b2bizabelomali ze-b2bukumaketha kwedijithali kwe-b2bukumaketha kwe-b2bb2b imisebenzi yokumakethab2b izabelomali zokumakethaIzinselelo zokumaketha ze-b2bb2b izinjongo zokumakethaizinto eziza kuqala ku-b2bb2b imithombo yezokuxhumanab2b umcabango wobuholiinfographicomobono